Shily: Horohorontany sy Fiakaran’ny Ranomasina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jolay 2017 18:23 GMT
Firenen'ny horohorontany i Shily. Nandritra ny volana vitsy lasa, niharan'ny hetsika horohoron-tany isan'andro ny faritra ao Aysén. Tamin'ny herinandro lasa, niteraka firodanan'ny fiord (vaingan-dranomandry milentika lalina anaty rano) tao an-dranomasina ny horohorontany mahatratra 6.2 amin'ny maridrefy Richter. Namely ny tanàna kely ao Puerto Tortuga ihany koa ny andiana horohorontany, nandrava zavatra maro nandritra ny fandalovany.
Maro ireo olom-pirenena nitsikera ny fihetsiky ny manampahefana, tahaka ny lahatsoratra tao amin'ny bilaogy Copihues Rojos [ES] ohatra:
Miadihevitra ny manampahefana mba hahafantarana raha fiakaran'ny ranomasina, tsunami na onja be fotsiny izany, tahaka ny hoe zava-dehibe tamin'ireo namoy havana akaiky, trano sy fiompiana izany. Nidina teny an-toerana ny filoha. Avy hatrany dia nitsikera azy ny ankavanana, nilaza fa fahadisoana ny nandehanana tany, saingy notsikerainy koa anefa raha tsy nandeha tany aza izy. Ny tanjona dia ny hamaha ny olana nateraky ny horohorontany sy hisoroka izay mety ho avy, satria mbola tsy fantatra izay mety ho avy. Tokony hotadidintsika fa roa taona lasa izay, tao avaratry ny firenena, nisy ny horohorontany goavana tao amin'ny tendrombohitra mandavana, ary mbola hita amin'ny tany ireo zavatra nirodana, tahaka ny fiangonana fahiny naorin'ny Espaniola, sy ny tsangambato manan-tantara, sns.
Anisan'ireo mpilatsaka an-tsitrapo ho amin'ny fiarovana sivily ny Capitán Tricolor [ES], nanomboka tamin'ny horohorontany tamin'ny taona 1985 tao amin'ny faritra afovoan'i Shily. Miresaka ny toe-draharaha ao Aysén, mampahatsiahy ny hetsika horohorontany namely ny faritra nanomboka tamin'ny volana Janoary teo izy. Nanazava izy fa namoaka tatitra tamin'ny volana Marsa ny Onemi (ES), (Biraom-pirenena momba ny Vonjitaitra) ary nanoro-hevitra mba hamindra ny faritra izay mety hisian'ny hovitrovitra mahatratra 6 amin'ny maridrefy Richter satria mety hitera-doza. Manazava ny antony izy:
Samihafa ny tranga tao Aysén. Nanambara ny Onemi fa ny horohorontany namely ny faritra nanomboka tamin'ny volana Janoary dia avy amin'ny volkano (fiforonan'ny volkano ambanin-dranomasina) ary nanamarika ny fahafatesan'ny biby an-dranomasina noho ny fiakaran'ny maripànan'ny rano ihany koa izy ireo. Tamin'ny herinandro lasa, nanambara fihotsahan'ny tany teo akaikin'ny tendrombohitra taorian'ny horohorontany ihany koa izy ireo.
Hatramin'izao, olona telo no namoy ny ainy, fito nanjavona. Ahitana fijoroana vavolombelona avy amin'ny lahatsoratr'ireo bilaogera vahiny tao Aysén ny bilaogy El Morrocotudo [ES]: Misionera ao Patagonia i Steve sy Rhonda Wilson [En] ary Jen [En] kosa Britanika monina miaraka amin'ny sakaizany ao Coyahique.
Mamoaka vaovao amin'ny aterineto mikasika ny horohorontany tao Shily nandritra ny Tantara ny Diban [ES] (Departemantan'ny Tranomboky, Tahiry sy Mozea), ka anisan'izany ny sary. Manome tatitra feno isam-bolana momba ny horohorontany kosa ny Sampan-draharaha momba ny Horohorontany [ES] sy ny Oniversiten'i Shily [Es].